Global Voices teny Malagasy » Fitokonana Tsy Fihinanan-kanina & Fifandonana ao Gaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Avrily 2018 11:54 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Akbar Ganji , mpanao gazety mpanohitra sady mpanoratra, no nanasa an'ireo Iraniana mba hanjohy azy nandritra ny fitokonana tsy fihinanan-kanina nandritra ny telo andro, ny 14 – 16 jolay, mba hisarihana ny sain'izao tontolo izao mikasika ireo voafonja ara-politika ao Iràna. Maro ireo blaogera nanohana ny heviny saingy ny sasantsasany kosa naneho ireo ahiahiny mikasika ny hetsika tahàka io.
Avy amina tontolo virtoaly mankamina tena fitokonana tsy fihinanan-kanina
Sibitala, blaogera monina ao Kanada, no milaza fa manohana ny hevitr'i Ganji izy mikasika ny telo andro tsy fihinanan-kanina  (Persiàna). Avy ao amin'ny Anjerimanontolo Toronto, nanoratra mikasika io hetsika fanoherana io izy tao amin'ny blaoginy :
Tohin'ny resaka an-telefonina niarahana tamin'Atoa Ganji, voafaritra hitohy tsy hisy fiatoana ilay telo andro tsy fihinanan-kanina (14-16 Jolay), ny dikan'izay tsy hody any an-trano izahay ny alina. Ho fihazonana ny aina, ny rano, ny dite ary ny siramamy. Namporisika anay koa izy mba hampandray anjara ireo namana sy mpiara-miasa aminay izay tsy Iraniana. Mety hanoratra fanambaràna iray mikasika ny fitokonana tsy fihinanan-kanina Atoa Ganji izay azonay ampiasaina hanaovana fanentanana; raha vao voarainay amin'ny imailaka io, dia ho zarainay. Tadidio fa anisany antony iray amin'io fitokonana io ny fangatahana famotsorana an'i Ramin Jahanbegloo, Mansour Osanloo ary Ali-Akbar Mousavi Khoeni.
Manasa ireo blaogera sy ireo hafa i Yadshthaye tanhayi mba handray anjara amin'io fitokonana tsy fihinanan-kanina io. Ampiana'ilay blaogera hoe iriany hanohana ny antsony hanao fitokonana tsy fihinanan-kanina ao anatin'ny tontolo tena izy fa tsy ao anatin'ny tontolo virtoaly fotsiny.
Nahoana no ireo anarana telo ireo ihany?
Nasle Farda, blaogera monina ao Iràna, milaza hoe nankasitraka hatrany ny risipon'Andriamatoa Ganji izy na dia tsy niraisany aza ny ankamaroan'ireo hevitr'Atoa Ganji, ohatra ireo fomba fijeriny ny ara-toekarena. Lazain'ilay blaogera fa i Ganji dia olona iray, tsy manana antoko politika ary tsy misolo tena kilasy sosialy na vondrona. Tsy afaka manao fanovàna (revolisiôna) miaraka amina olona iray monja ianao. Hoy izy manampy:
Tsy miandry ny hitondran'ity karazana tsy fihinanan-kanina ity fahasamihafana eo amin'ny fiainana ara-politika iraniana ahona kely aza. Tsy azoko hoe nahoana no voafonja ara-politika telo monja no notononin'i Ganji.
Tsy ireo raharaha iraniàna irery ihany akory no olana resahan'ireo iraniana blaogera. Ireo vaovao iraisam-pirenena mafàna sahala amin'ny fifandonana tao Gaza  dia niteraka ireo fanehoankevitra mahaliana teny anivon'ireo iraniana blaogera.
Zo handry Fahalemana
Milaza i Fovad Shams fa tokony hijery an'ity fifandirana ity mihoatra lavitra noho ny fifandonana misy eo amin'i Isiraely sy Palestina isika (Persiana). Milaza ny blaogera hoe:
Fifandirana eo amin'i Isiraely miankina amina kapitalista io, sy ny politika islamisma zay amonoany olona ho amin'ny tombontsoany. Vehivavy iray no niteny fa tsy afaka nanery azy niala tao Gaza i Isiraely nandritra ireo taona 50 lasa, fa noho ny tsy fahaizana mitantan'ny Hamas… no nanery azy handeha hamonjy ny fianakaviany tany Kanadà. Jereo ny nentin'ny politika islamisma ho an'ny vahoaka tao anatina fotoana fohy.
Manoratra i Naghde Hal Gaza fa tokony ho toerana onenan'ny mponina i Gaza, fa tsy tanin'adin'i Hamas & Isiraely. Tokony hiaina any ny mponina ivelan'ny finoany, ny foko na fiteny niaviany. Azafady, averenao ny fiainana ho an'ireo ankizy ao anatin'io Gaza feno rà mandriaka io.
Firenena andalam-pandrosoana very fanantenana!
Diso fanantenana tamin'ny fihetsik'ireo firenena tandrefana mikasika ny fifandonana tao Gaza (Persiana) i Mohammad Ali Abtahi , politisiana reformista sady blaogera. Nisarika ireo mponina rehetra ny Tandrefana mba hisafidy ny demokrasia sy ny soatoaviny amin'ny lafiny iray, saingy amin'ny lafiny ilany, mitohy tsy manameloka ireo fihetsik'i Isiraely manohitra ireo Minisitra Hamas sy ireo solombavambahoaka voafidy ara-demokratika ao amin'ny Parlemanta, ireo firenena tandrefana. Ampian'ilay blaogera hoe:
Ny vokatry ny karazana fihetsiketsehana tahàka ireny dia ny tsy fanarahan'ireo firenena andalam-pandrosoana intsony ny làlana demokratika ary ho maro ireo ady hitranga.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/25/118156/
 manohana ny hevitr'i Ganji izy mikasika ny telo andro tsy fihinanan-kanina : https://mg.globalvoices.org http://sibiltala.blogspot.com/2006/07/httpwww.html
 fifandonana tao Gaza: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5153036.stm
 Diso fanantenana tamin'ny fihetsik'ireo firenena tandrefana mikasika ny fifandonana tao Gaza : http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146307941
 Mohammad Ali Abtahi: http://www.answers.com/topic/mohammad-ali-abtahi